International Hotel Projects - Armati Hotel Project In Afrika
Zoma, Febroary 12, 2016 9: 16: 27 AM America / Los_Angeles
Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manomboka Armati 5 tetikasa in Africa Atsimo, Afrika, Tonga soa eto amin'ny mitsidika ity trano fandraisam-bahiny mba hahita ny faucet.
Armati 413 andian-dahatsoratra faucet catalouge azafady jereo izao manaraka izao:
Zavatra tsy Johannesburg ny toerana fandraisam-bahiny tao Sandton, ny tanàna ny upscale fandraharahana distrika, dia mandeha fotsiny fohy avy Gautrain Station sy minitra hiala manintona tahaka an'i Nelson Mandela Square. Vahiny mahazo mora ny fidirana amin'ny OR Tambo Airport iraisam-pirenena, izay ihany no 30 kilometatra avy ao amin'ny hotely. Fidio avy 290 amin'ny efitrano misy ao toy ny Free haingam-pandeha, Wireless Internet ho an'ny vahiny monina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, na hifidy ny iray ho an'ny omena stylish penthouse fitehenan-tanana. Vahiny mipetraka ao amin'ny Business Class Rooms, Suites sy penthouses tia fahafahana hahazo ny Business Lounge Class. Jereo toy ny chefs manomana italiana maoderina nahandro ao an-misokatra amin'ny Vivace-dakozia. Ny masoandro sy ny tokotanin-tsambo eny an-kalamanjana 8th dobo teo amin'ny tany, ny miala voly sy ny tsara Spa-ampy fitaovana Planet Fitness Platinum Gym mampanantena fahafahana ampy mba sorisory. Trano fandraisam-bahiny ity ny tolotra Johannesburg ihany koa ny fiantsonan'ny fiara ahitana azo antoka. Event Tompon'ny maro, dia afaka mitahiry ny 90-seater efitrano malalaka, na iray amin'ireo 15 ampy fitaovana tsara-efitra fivoriana ho an'ny fandraharahana sy ny fiaraha-mikorana.
Africa Hotel efitra fandroana tetikasa